दिनमा हराउछौं, रातमा हुन्छ र माया ? थर पो सोध्छेउ त जातमा हुुन्छर माया ? | Butwal Dainik
दिनमा हराउछौं, रातमा हुन्छ र माया ? थर पो सोध्छेउ त जातमा हुुन्छर माया ?
प्रकाशले हालै बदला बरिलै सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त गीतलाई पनि दर्शकले धेरै रुचाएका छन् । हालै उनको एक सायारी निक्कै चर्चामा छ । दुईबर्ष अघि फिल्मिबज नेपालले लिएको एक अन्तर्वार्ताको क्लिप टिकटकमा निकै भाईरल भएको छ । “दिनमा हराउछ्यौ रातमा हुन्छ र माया? थर पो सोद्छ्यौ त जातमा हुन्छ र माया? ” यो सायरी अहिले निक्कैले सेयर गरिरहेका छन् ।